The Gwenzi shanu uye 243 paylines cheap car insurance, Sam pamusoro Beach hunobva yedu kufarira troll kubva Electric Sam. nguva ino iye nemhuri yake pazororo kusvika muCaribbean. Kubatana navo mafaro kwavaizoenda pamahombekombe. Izvi zvinonakidza mutambo inowanikwa kutamba pamusoro UK yakanakisisa paIndaneti dzokubhejera.
Pamusoro Developer pamusoro Sam pamusoro Beach
Elk Studios kwave kumativi kubva 2012 uye rwauya sechinhu chinoshamisa kasino Software yokuvaka. The kambani zvokuyamura mhuka zhinji uchitamba mutambo dzaishandisa. slots ichi kunokudziridzwa navo uye anogona kuridzwa panguva UK yakanakisisa paIndaneti dzokubhejera.
slots Izvi zvinogona kuva zvinhu zvishanu Gwenzi asi pane zvachose 243 nzira dzaunogona kuisa bheji uye kuhwina. The nemaziso kunofadza pakanyorwa mutambo inoratidza paitikira pamhenderekedzo wakakwana. Zviratidzo pamusoro Gwenzi zvose maererano dingindira iri mutambo yokuti anogona kuridzwa pa UK yakanakisisa paIndaneti dzokubhejera. The low-ukoshi zviratidzo ndivo neon mavara magakanje, Starfish, uye seahorses. Mukuru-ukoshi zviratidzo ndivo Sam ari troll uye mhuri yake izvo zvinosanganisira mudzimai wake Sandra, mukoma wake, Ted, uye mwanasikana wake Maggie.
The-siyana izvi UK yakanakisisa paIndaneti dzokubhejera slots vari:
Free Tunoruka- The uparadzire ndiyo icon bhero uye kunokonzera chikamu ichi apo matatu kana kupfuura Anoparadzira izvi nyika reels.You achawana 5, 10, kana 15 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso nokuti kumhara 3, 4, kana 5 Anoparadzira.
Beach Memories Respin- Kana uine chinjikira mutsetse mubatanidzwa ose dzemhuri ipapo chikamu ichi chichange chokugutsikana. Muwane respin pamwe 4 Sticky remake.
Electric Treats- Nyaya iyi mupenyu panguva Free Muruoko rwake anobata chirukiso kumativi ose mana vemumhuri nezvaanoita ichi. rova 3 kana kupfuura Sam mifananidzo iri vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso uye iye electrifies munhu chero mifananidzo iyo zvino yava Sticky dzomusango. rova 3 kana kupfuura Sandra mifananidzo uye iye anopa kusvika 10x multiplier 3 Maggie mifananidzo uye iye runogonesa yakahwina dzenyu mikana nokuita zvose nechepazasi ukoshi mifananidzo inonyangarika kubva Gwenzi. rova 3 Ted mifananidzo uye iye ikakupa Sticky multiplier.
It ari mafaro, nakidza mutambo zvakawanda zvinhu akuchengete kufarira mutambo. The UK yakanakisisa paIndaneti dzokubhejera mutambo unokubvumira kuhwina kukwira 2,275 nguva wager they yako.